ဘာ MSMPENG.EXE လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး PROCESSOR ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်သို့ပို့ဆောင်ထားမည် - WINDOWS ကို - 2019
ဘာ MsMpEng.exe လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး Processor ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်သို့ပို့ဆောင်ထားမည်
Task Manager ကို, Windows 10 ကို (နှင့် 8-ke) အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များလူတို့တွင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ် MsMpEng.exe Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable နှင့်တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့သောအားဖြင့်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်, ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲအရင်းအမြစ်များကအရမ်းတက်ကြွအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုသူက "ဝန်" ဟုအဆိုပါ CPU ကိုသို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ် (နှင့်က fix ဖို့ဘယ်လို) နှင့်မည်ကဲ့သို့ MsMpEng.exe disable လုပ်ဖို့၏ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်စဉ် Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable, ကြောင်းကိုအသေးစိတ် - ဒီဆောင်းပါးမှာပါ။
function Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executive (MsMpEng.exe) ဖြစ်စဉ်ကို
MsMpEng.exe - အဆက်မပြတ် default အနေဖြင့်အပြေး (လည်း Windows 8 ကိုစတညျဆောကျ Windows7အတှကျ Microsoft က Anti-Virus ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် installed နိုင်ပါသည်) Windows 10 ကို antivirus ကို "Windows Defender" သို့ built အခြေခံနောက်ခံဖြစ်စဉ်ကို။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏ executable file ကိုဖိုင်တွဲထဲမှာတည်သည် ကို C: Program Files Windows Defender .
အဆိုပါ Windows Defender ကိုအင်တာနက်ကနေ downloads, နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြားခြိမ်းခြောက်မှုများအားလုံးကိုအသစ်ဖြန့်ချိအစီအစဉ်ကို check လုပ်ပေးပါတယ်အခါ။ ဒါ့အပြင်အခြိနျမှနျမှအလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များ running ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အဘို့အပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်နှင့် malware များအဘို့ drive ကိုအကြောင်းအရာအောက်မှာ။
MsMpEng.exe Processor ကိုတင်ပို့နှင့် RAM ကိုအများကြီးအသုံးပြုသည်အဘယ်ကြောင့်
တောင်မှသာမန်စစ်ဆင်ရေးမှာ Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable သို့မဟုတ် MsMpEng.exe CPU နဲ့ RAM ကို Laptop ကို memory ကိုတစ်သိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ကရှည်လျားပြီးအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကြာရှည်မထားဘူး။
Windows 10 ကိုပုံမှန်လည်ပတ်မှာတော့အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုအောက်ပါအခြေအနေများတွင်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များသိသိသာသာငွေပမာဏကိုသုံးနိုင်ပါသည်:
ထိုခဏခြင်းတွင် (နှေးကွေး PC များသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့အပေါ်မိနစ်အနည်းငယ်အထိ) အချိန်အတန်ကြာအပေါ်လှည့်နဲ့ Windows 10 ရက်နေ့တွင် log ပြီးနောက်။
အချို့ရပ်နားခြင်းအချိန်ပြီးနောက် (ထိုစနစ်၏အလိုအလျှောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကို run) ။
သငျသညျ applications များနှင့်ဂိမ်းများ, အင်တာနက်ကနေ executable files တွေကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ, မော်ကွန်းတိုက်ကိုဖြည် install လုပ်ပါ။
(startup မှာတိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်) အစီအစဉ်များကို run လိုက်တဲ့အခါ။
သို့သော်အချို့ကိစ္စ၌, CPU ကိုအပေါ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်နိုင်ပါတယ် MsMpEng.exe နှင့်အထက်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုလွတ်လပ်သောစေ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အခြေအနေကအောက်ပါအချက်အလက်များကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်ပြင်ပေး:
ဝန်က "Down Shut" နှင့် Windows 10 ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ထို့နောက် Start menu ကနေ "ပြန်လည်စတင်ပါ" ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ဦး reboot အရာအားလုံး (ကဝန်၏အတိုခုန်ပြီးနောက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်) နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်ပြီးနောက်လြှငျ, Windows 10 ကို၏လျင်မြန်ပစ်လွှတ်ကို disable စမ်းပါ။
သငျသညျ Third-party antivirus ကိုဟောင်းများကိုဗားရှင်း (ပင်သစ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဒေတာဘေ့စလျှင်) installed ကြလျှင်, ထိုပြဿနာနှစ်ခုရောင်းချသူအကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ခေတ်သစ် Anti-virus software ကို Windows 10 ကိုအတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်တိကျသောထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်. ဒါမှမဟုတ် Defender ကိုရပ်တန့်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, တူညီတဲ့ antivirus ကိုပရိုဂရမ်ဗားရှင်းအဟောင်းပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် (နှင့်တခါတရံသူတို့ကအခမဲ့ paid ထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်သူကိုအသုံးပြုသူများက '' ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဖြည့်ဆည်းရန်ရှိသည်) ။
Windows Defender "ကိုင်တွယ်" မနိုင်ထားတဲ့ malware, ကိုလည်း Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable အားဖြင့်မြင့်မားတဲ့ CPU ကိုအသုံးချစေနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ, အထူးသဖြင့်, အထူးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖယ်ရှားရေး Tool ကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားနိုင် AdwCleaner (က install လုပ် antivirus ကိုအတူဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပါ), သို့မဟုတ် antivirus ကို Boot တက် disk တွေ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ hard disk ကိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာများကြုံနေရသည်ဆိုပါကလည်းပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုငျသညျ, အမှားအယွင်းများများအတွက် hard drive ကိုစစျဆေးဖို့ကိုဘယ်လို။ ကြည့်ပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင်ပြဿနာကို Third-party န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျကို Windows 10. ၏စင်ကြယ် Boot တက်လုပ်ဆောင်လျှင်သင်အရာအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလျှင်, မြင့်မားသောဝန်ရှိမရှိ Check ပုံမှန်ပြန်ကြွလာ, သင်ကပြဿနာကိုသိရှိနိုင်ဖို့, Third-party န်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းရန်တဦးတည်းကြိုးစားနိုင်ပါ။
သူ့ဟာသူ MsMpEng.exe များသောအားဖြင့်မဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, သင်မူကားထိုကဲ့သို့သံသယရှိပါက, Task Manager ကိုအတွက်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကို Right-click ထောက်ပြီး context menu ကိုကို item "ပွင့်လင်းဖိုင်တည်နေရာ" ကိုရွေးချယ်ပါ။ သူ၌တည်ရှိ၏ အကယ်. ကို C: Program Files Windows Defender, အများစုမှာဖွယ်ရှိကအားလုံးကိုလက်ျာ (သင်ကိုလည်းဖိုင်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတွေ့မြင်ကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်မိုက်ကရိုဆော့ဖကလက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်နိုင်သည်) ပါပဲ။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ - Windows မှာဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်တွေ 10 ဖြစ်စဉ်များ running သိမ်းနိုင်ပါပြီ။
MsMpEng.exe disable လုပ်နည်း
ကတိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်ကွန်ပျူတာ load ပုံမှန်အားနှင့်ရံဖန်ရံခါ operating လျှင်ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သင်တို့အားငါ MsMpEng.exe disable ပါဘူးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သို့သျောလညျးကို disable လုပ်ဖို့ Option တစ်ခုရှိသေး၏။
သငျသညျအချိန်ပေါ် Antimalware ဝန်ဆောင်မှု Executable disable လုပ်ဖို့လိုလျှင်, ကိုယ့်ကို "Windows Defender လုံခြုံရေးစင်တာမှ" ကိုသွားပါ (system ကိုဗန်းထဲမှာနောက်ခံလူအိုင်ကွန်ကို double-click), ထို့နောက် "ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" ကိုရွေးချယ်ပါနဲ့ - "ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးန့်သတ်ချက်များဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကနေ" ။ "အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ " uncheck ဆမ် MsMpEng.exe ဖြစ်စဉ်ကိုအပြေးဆက်လက်တည်ရှိမည်, သို့သော် (အချို့အချိန်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုအလိုအလျောက်ပြန်စနစ်က activated ပါလိမ့်မည်ပြီးနောက်)0င်ရန် drop မှ CPU ကိုအသုံးချကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါကြောင့်နှစ်လိုဖွယ်မဖြစ်ပေမယ့်သင်ကလုံးဝ, Built-in ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို disable နိုင် - Windows 10 ကိုနောက်ခံလူကို disable လုပ်နည်း။
ဒါကအားလုံးပါပဲ။ ငါကဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့ဖြစ်၏နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ရဲ့ system ကိုအရင်းအမြစ်များတက်ကြွစွာအသုံးပြုမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။